स्रोत उपभोगको अवरोधले स्थानीय र एक्यापबीच दूरी बढ्दै – ostake
चामे, ३० भदौ : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र स्थानीय सरकारबीच पछिल्लो समयमा विवाद बढ्दै गएको देखिएको छ । दश वर्षभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्यादसहित सन् १९८६ मा स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अहिलेसम्म पनि कायम छ र बर्सेनि म्याद थप हुँदै आएको छ । तत्कालीन पाँच जिल्लाका ५७ गाविसमा विस्तार भएको एक्याप नयाँ संरचनाअनुसार यहाँका १६ वटा स्थानीय तहमा पर्छ । अहिले देशमा अधिकारसम्पन्न तीन तहका सरकार छन् । संविधानअनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ । यी १६ स्थानीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सबै स्रोत साधन एक्यापले परिचालन गरिदिएपछि १६ वटै स्थानीय तह स्रोतविहीन बन्न पुगेका हुन् । वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूसँग पनि पटकपटक द्वन्द्व हुने गरेको थियो । नियमावलीमा उसको क्षेत्राधिकारका सबै स्रोत उसैले उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ । यसरी अधिकार बाझिँदा एक्याप लागू भएका क्षेत्रमा समानान्तर सरकारजस्तो देखिन थालेकाले सर्वसाधारण नागरिक पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेको देखिन्छ । एक्याप रहेको तत्कालीन गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्ला कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी अहिले गण्डकी प्रदेशभित्र छन् ।
‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को परिकल्पनाअघि नै प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरतामा भरिपूर्ण थिए, कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी । यद्यपि ती स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन भएको थिएन । परिणामस्वरुप चोरी सिकारी बढी हुने गर्दथ्यो । स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सहितको उपभोग एक्यापको परिकल्पना हो । एक्याप गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीयवासीले देख्ने गरी के काम भएको छ ? सधैँ विकासमा अवरोध गर्ने ? स्थानीयवासीको जनजीविकामा समस्या खडा गर्ने मात्रै भएको छ नेकपा मनाङका सचिव बेदबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ, “एक्याप छुट्टै छ, स्थानीय सरकार छुट्टै छ, जनताले कसको कानून मान्ने ?” सन् १९८६ मा घान्दु्रकबाट शुरु भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना सन् १९९२ मा मनाङमा विस्तार गरिएको थियो । “कानूनी व्यवस्था नमान्ने भनेको होइन साथसाथै प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टतालाई पनि हेर्नुपर्छ”, नेपाली काँग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङ भन्नुहुन्छ, “एक्यापको व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारण जनता आफ्नै बारीको काठ काट्न पाउँदैनन्, देशमा गणतन्त्र आयो तर मनाङी जनतालाई गणतन्त्र आउनै सकेन ।”
“प्रत्येक गाउँमा एक्यापका कर्मचारी जाँदा फूलमालाले स्वागत हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन”, उहाँले थप्नुभयो, “विगतमा एक्यापको ठूलो योगदान पनि छ, तर अहिले आएर त्यो आकर्षण छैन ।” गुरुङ जनस्तरको अपेक्षाअनुसार काम नगरेका कारण एक्यापसँग जनसमुदायमै असन्तुष्टि बढेको बताउनुहुन्छ । आयोजनामा जनसहभागिता बढाउनकै लागि गाउँगाउँमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । कसैले काठ, दाउरा काट्नुपर्दा तिनै समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ । सिफारिस दिँदा उठेको रकम समितिले विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्छन् । तर कुन समितिले कति पैसा उठायो र कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब पारदर्शी ढङ्गले नराखिएको आरोप स्थानीय नेताहरूको छ ।
“कति सिएमसीका अध्यक्षहरु अहिले सांसद हुनुहुन्छ । हामी नै जान्नेबुझ्ने भएको पनि एक्यापको पछि लागेर हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आजभोलि विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना भएपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ, स्थानीयसँग समन्वय गर्न सके अहिले देखापरिरहेको यो वितृष्णा घटेर जानेछ ।” एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकले रु दुई हजार तिर्नुपर्छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकलाई रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत यही हो । यो संस्था संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली विसं २०५३ को अन्तर्गत सञ्चालित छ । एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले विकासका काममा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पूरै कर्मचारीको विश्वासका साथ काम गर्ने हो, उहाँहरुले कहिलेकाहीँ गलत रिपोर्ट दिँदा विरोध आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा सुधारेर जानु सबैको हितमा छ, एक्याप स्थानीयकै पक्षमा छ, संरक्षणको पक्षमा छ ।” विकास निर्माणका काममा कुनै अवरोध नगरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
“कसैले घर बनाउँदा काठ काट्न पाउँदैनाँै भनेको छैन । तर नियमानुसार गर्नु भनेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मनपरी गर्न दिने हो भने वनजङ्गल बाँकी रहँदैन, हरियाली डाँडा उजाडिन्छन् ।” आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम तय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मनाङको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत भनेकै पर्यटन र जडीबुटी हो । यो दुवै क्षेत्र एक्यापको स्वामित्वमा छ । अहिले संविधानले गाउँपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यद्यपि मनाङका चारवटै गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पहुँच छैन । सबै गाउँपालिकामा विसं २०४९ मा एक्याप लागू भएदेखि यहाँका स्रोतसाधन सङ्कलन र उपभोगको अधिकार पूरै उसैसँग छ । “प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतको कर जम्मा गरिदिन भन्छ । हामीले कुनै स्रोत चलाउनै पाएको छैन”, चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घले भन्नुहुन्छ, “संविधानले आफ्नै स्रोतबाट गाउँपालिका चलाउनु भनेको छ, सबै स्रोत एक्यापको अधीनमा छ, मनाङका स्थानीय तहले कुन स्रोत खोज्ने ?” आफँैले संरक्षण गरेको स्रोत आफँैले प्रयोग गर्न नपाउँदा एक्यापप्रति वितृष्णा बढेको उहाँको भनाइ छ ।
नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले एक्याप र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा एकरुपता नभएको बताउनुभयो । “उहाँहरु छुट्टै सरकारजस्तो गर्नुहुन्छ । गाउँसभामा कार्यक्रम पेश गर्नुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि गाउँपालिकाको पैसा पर्छ । आपसी समन्वय नहुँदा योजनामा दोहोरोपना छ ।” उहाँको बुझाइमा एक्याप र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा द्वन्द्व बढी छ । “एउटा काठ काट्नुप¥यो, एक्यापको स्वीकृति चाहिन्छ, एउटा ढुङ्गा निकाल्न पनि एक्यापलाई नै गुहार्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिकाले पनि एक्यापलाई सोधेर काम गर्नुपरे जनप्रतिनिधिको औचित्य के ? सङ्घीयताको औचित्य के ?” मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण विवाद देखिएको बताउनुभयो । “सबै खत्तमै गरेको होइन । जुन हिसाबले तल्लो तहसँग समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्राधिकार समान हुँदा द्वन्द्व बढेको हो । धेरै समस्याको समाधान दुई पक्ष बीचको समन्वयले हुन सक्छ ।” स्रोतकै उपभोगमा बढी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । स्रोत चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयवासीले एक्यापअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरुमा पटक पटक तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । मनाङका तिल्चे, थोंचे, नाचै र ताल क्षेत्रमा सामुदायिक वन छन् भने अरू सबै क्षेत्र एक्याप मातहत छन् ।
एक्यापका कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार गुरुङ स्रोत परिचालनको समस्या संरक्षण क्षेत्रभरि रहेको भन्दै सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “यो सिङ्गो क्षेत्रको समस्या हो । स्थानीय तहले आफ्नो ऐन लागू गर्न खोज्छ । हामीले हाम्रो नियम हेर्छौं । यसैले समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानूनबाटै स्पष्ट भएको छैन । हामी त राज्यको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो ।” उहाँले जिल्लाभित्रको विकास निर्माणमा एक्यापले कुनै अवरोध नगर्ने बताउनुभयो । “स्थानीय विकासको काममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्घीय कानूनअनुसार निकाल्न पाउँछन् । बाहिर निकासी गर्न चाहिँ पाइँदैन”, गुरुङले भन्नुभयो, “स्रोत परिचालनमा केही असमझदारी भए छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ ।” स्रोत उपभोगमै समस्या भएपछि आइतबार जिल्ला समन्वय समितिले एक्याप र सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो । बैठकले समन्वयबाट अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उहाँले पाएका दुईवटा ओछ्यान, सिरक, सिरानी र तन्ना कोठामै थन्किएको छ । “आमा बूढी हुनुहुन्छ । त्यैपनि बिरामी भएर अस्पताल गइरहनुपर्छ”, सुन्तासीकी छोरी विमला घलेले भन्नुभयो, “घरबास (होमस्टे) भनेको के हो थाहै छैन पाहुना कसरी राख्ने ?” सोही ठाउँकी मोती गुरुङको सानो घर छ । मुस्किलले आफ्नो परिवार सुत्नसमेत कोठा पुग्दैन । उहाँको घरमा पनि घरबास सञ्चालन गर्न सामग्री दिइएको छ । उहाँहरु जस्तै त्यो गाउँमा १४ परिवारले घरबासको सामान पाएका छन् । सामान पाएका अधिकांशले घरबास चलाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयसँगको सहमति विना सामान दिएका कारण घरबास चलाउन समस्या परेको उनीहरुको भनाइ छ । उता घरबासको सामान बाँडेदेखि होटलसँगको सम्बन्ध चिसिएको पाइएको छ । “होटलमा आइरहेका पाहुना घरबासमा जान्छन्, लगानी गरेको होटललाई असर गर्छ”, होटल व्यवसायी धनबहादुर गौचनले भन्नुभयो, “होटल भएको ठाउँमा होमस्टे खोल्दा राम्रो हुँदैन, यो कार्यलाई सुधार गर्नुपर्छ ।” एक्यापले यो वर्ष थान्चोकसहित खाङसारमा पनि घरबास सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । खाङसारमा स्थानीयवासीकै अवरोधले खरिद गरिएको सामान वितरण हुन सकेको छैन । दुवै घरबास दर्ता गरिएका छैनन् । (रासस)